Banaanbax weyn oo Madaxweyne Farmaajo lagu taageerayo oo ka dhacay magaalada Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Banaanbax weyn oo Madaxweyne Farmaajo lagu taageerayo oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Banaanbax weyn oo Madaxweyne Farmaajo lagu taageerayo oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Max’uud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ka qeyb galay banaanbax ballaaran oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Dibed-baxan oo lagu taageerayey qaraarkii metelaada gobolka Banaadir ee uu shalay saxiixay madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb galay, masuuliyiin fara badan oo iskugu jiray, Xildhibaano ka tirsan labada gole ee Baarlamanka, gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo qeybaha bulshada.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo ka hadlay banaanbaxa ayaa uga mahad celiyey Madaxweyne Farmaajo ansixinta metelaada gobolka Banaadir oo uu sheegay iney tahay mid muddo dheer maqneyd oo la sugayey.
Waxaa sidoo kale munaasabadaas ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo uu ka mid ahaa Daahir Amiin Jeesow oo digniin ka bixiyey in laga hor yimaado metelaada ay heleen shacabka gobolka Banaadir.
Previous articleWasiir Janan oo Dagaal kale ku goodiyey
Next articleBeesha Caalamka oo war ka soo saaray arimaha Doorashada
Ciidamada Amniga waddanka Jordan oo weeraro hubeysan kula kulmay caasimada...